9,0 QIIMAYNTA SHARCIYADA SHAQAALAHA EE EURO OO DHAMMAAN DALALKA MALYAN EU WAXAAN SOO GAreynaa USA iyo UK SIDOO KALE.
Tignanello wuxuu ahaa Sangiovese kii ugu horreeyay ee da 'ahaan ku noolaa barriques, khamri casri ah oo casri ah oo lagu daray noocyo aan shuruud lahayn (gaar ahaan Cabernet) iyo mid ka mid ah guushii ugu horreysay ee gaduudan gobolka Chianti Classico ee aan isticmaalin canab cad. Tignanello waa guul weyn. Waxaa lagu soo saaray xulashooyinka Sangiovese, Cabernet Sauvignon, iyo Cabernet Franc.
Silvio Coppola wuxuu naqshadeeyay 1974 siideynta Tignanello 1971. Fikradda ah in loo dhiibo fanaaniinta waxaa looga wada hadlay munaasabad ka dhacday Castello Della Sala 1973. Silvio Coppola wuxuu ahaa astaamaha muhiimka ah ee nashqadeynta Talyaaniga iyo nashqadeynta gudaha oo caan ku ahaa aaladaha iftiiminta ugu yar. iyo qalabka guryaha lagu xiiseeyo laakiin sidoo kale naqshadaha buugga ee loogu talagalay shirkadda daabacaadda Talyaani ee Feltrinelli. Silvio Coppola wuxuu ahaa kulanka ugu fiicnaa shaqada.
Marchesi Antinori 2017 Tignanello (oo laga sameeyay Sangiovese iyo qaybo yaryar oo ah Cabernet Sauvignon iyo Cabernet Franc) waa mugdi, farxad, iyo soo-dhoweyn khamri. Waxaan dhadhamiyay muunadadayda kadib laba laabmayaal waxaana ku qancay dabeecadda qotodheer ee khamriga iyo furitaanka degdegga ah ee udgoonka udgoonku. Waxa jira cod-bixinno miro madow leh oo leh miro madow, tubta, udgoon, iyo tubaakada macaan. Waxaan si gaar ah u soo jiitay muuqaal aad u fog oo ka mid ah geedaha dawada ama dawada ah ee aan ka helay sidoo kale noocyo kale oo miro ah oo ka yimid deegaanka Tignanello sanadkii 2017. Waxaa kale oo jira qoraal macdanta qallalan oo ah nuuradka la jajabiyey sidoo kale. Kuleylka iyo qallalka canabku waxay ku darsadeen xoogsiga udgoon khamrigan (wax soosaarkii saddexaad oo la yareeyay). Hadana, afka afku si taxaddar leh ayaa loogu xardhay si loo ilaaliyo jilicsanaanta iyo jilicsanaanta.
Qaab weyn, oo liita, casaankani wuxuu bixiyaa caraf udgoon iyo dhadhan currant madow, cherry, violet, flint, tobaakada, iyo dhir udgoon. Tani waa supple, weli waxaa taageeraya shirkad adag, oo cufan oo ah tannins, sidaa darteed dhammaan walxaha jira ayaa jira, laakiin tani waxay u baahan tahay waqti si ay u dhexgalaan. Jacayl macaan, dhammeeyay u bislaaday. Sangiovese, Cabernet Sauvignon iyo Cabernet Franc. Ugufiican laga bilaabo 2022 illaa 2040.